Linux Mint 20.1 Ulissa zviri pamutemo inogara nenhau idzi | Linux Vakapindwa muropa
Linux Mint 20.1 Ulissa zviri pamutemo inogara nenhau idzi
Semuna 2019, Clement Lefebvre akativimbisa vhezheni itsva yeanoshanda system pamberi peKisimusi. Iyo vhezheni haina kusvika, uye kana nhau nezvayo, kusvika muna Zvita 2020 tsamba vakatitsanangurira kuti sei: paive nemabhugi ekugadzirisa izvo, kunyange chiri chokwadi kuti chakabata vashandisi vashoma, hachivatenderi kuvhura Linux Mint 20.1 pavakange vazvironga. Zvino, iyo yekumirira yasvika kumagumo.
Ulyssa, rinova iro zita rekodhi ravakashandisa Linux Mint 20.1, yave kuwanikwa kurodha zviri pamutemo. Parizvino, chero chinyorwa chawakaverenga nezve ichi chigadziriso chakangovimbisa kuti Lefebvre akaisa mifananidzo nyowani, yaive danho rekutanga, asi ikozvino vatotumira matatu manotsi ekuburitsa (Cinnamon, Xfce y MATE) Uye i100% yechokwadi kuti iyo yakadzvanywa mifananidzo haizotsiviwa nevamwe, chimwe chinhu, nenzira, iniwo handirangariri chakamboitika uye chaingova chiito chako pachako: kumirira kuvhurwa kwepamutemo kushandisa chimwe chinhu.
Linux Mint 20.1 Ulyssa akasimbisa
Kubva paUbuntu 20.04 Focal Fossa.
Inotsigirwa kusvika muna 2025.
Hypnotix, chirongwa chitsva chekuona IPTV zvemukati (senge M3U zvinyorwa).
Webhu Apps Maneja, Anwendung kugadzira web zvishandiso zvakafanana neICE.
Desktops: Cinnamon 4.8, MATE 1.24 uye Xfce 4.14.
Kunyangwe izvi zvataurwa nezvakawanda, kumhara kweChromium sepakeji muLinux Mint repositories zviri pamutemo izvozvi.
Tsigiro yezvatinoda uye chikamu chayo mune maneja wefaira.
Kudhinda uye kuongorora kwakagadziridzwa nekubvisa iyo ippusbxd mutyairi.
HP Linux Kufananidza uye Kudhinda (HPLIP) yakagadziridzwa kuita vhezheni 3.20.11.
Iye zvino unogona kusefa nezvikwereti muPix, muoni wemufananidzo uye browser.
Celluloid ine hardware yekumhanyisa inogoneswa nekutadza.
Iyo faira yehurongwa yakabatanidzwa.
Linux Mint 20.1 Ulyssa inowanikwa mune zvakajairwa zvinwiwa, iri iro rakakura vhezheni mukati Sinamoni uye nesarudzo muXfce neMATE, kubva pane peji rekurodha peji iro ratingawana kubva Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux Mint 20.1 Ulissa zviri pamutemo inogara nenhau idzi
Kwandiri, chakanyanya kundifadza yaive webhu maneja webhu, asi nguva pfupi yadarika ndakabuditsa beta yacho (inoenderana neshanduro yeLM 19.3 - iyo yandaisa-), uye nemabatiro andiri kuita zvakanaka neiyo beta , uye dzimwe nyaya dzese hadzifarire kwandiri zvakanyanya, nekuti ikozvino ndichagara sezvandiri, zvirinani kusvikira iyo 5.8 kernel yawanikwa.
Zvekutaura pachena. Dzimwe nzira dzekuona mavhidhiyo ayo YouTube asingade kukuratidza
Mitambo yemavhidhiyo inonakidza inouya kuLinux muna2021